अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश – Durbin Nepal News
कार्तिक २३, २०७६ १:३८ मा प्रकाशित
Security personnel (front) stand guard alongaroad in Ayodhya on November 9, 2019, ahead ofaSupreme Court verdict on the disputed religious site. - India braced on November9foraSupreme Court ruling overaholy site contested for centuries by Hindus and Muslims, which in 1992 sparked some of the deadliest sectarian violence since independence. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP)
नयाँ दिल्ली, २३ कात्तिक : भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिबार आदेश दिएको छ ।
हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भन्नुभयो, “मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिनुभयो ।
उहाँको आदेशमा अहिले विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
इजलाशमा एस ए बोब्डे, डि वाई चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिर गरी चार जना न्यायाधिश रहनु भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गर्नु भएको थियो । उहाँले “फैसला जे सुकै भएपनि‘.त्यसलाई कसैले हारजितको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो ।
अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ ।